IGAD oo ka digtay duufaanno ku soo fool leh xeebaha waqooyi Bari ee Puntland… – Hagaag.com
20 Maajo 2019 in National // Madaxa sare ee arrimaha dibada ee Midowga Yurub oo booqasho ku tagtay Mogadishu…
20 Maajo 2019 in National // Mas’uuliyiin ka tirsan federaalka oo ku xayiran garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta…
20 Maajo 2019 in Sports // Suuqa kala iibsiga ee xagaaga oo shidan oo laacibiin badan ku kala wareegi doona…
20 Maajo 2019 in National // Wasaarada Waxbarashada oo soo saartay jadwalka Imtixaanka Shahaadiga ee dugsiga sare…
20 Maajo 2019 in National // Xildhibaanada Golaha Shacabka ee federaalka oo meel mariyey sharciga Batroolka dalka…
IGAD oo ka digtay duufaanno ku soo fool leh xeebaha waqooyi Bari ee Puntland…
Posted on 25 Maajo 2018 by Admin in National // 0 Comments
War Saxaafadeyd ay soo saareyn Urur goboleeedka IGAD ayaa ka digay duufaanno kusoo fool-leh xeebaha waqooyi Bari ee Puntland.
War saxaafadeed kasoo baxay Xarunta Saadaasha Cimilada ee urur-goboleedka IGAD ayaa digniin ka bixisay waxa ay ku tilmaantay xaaladda isa sii taraysa ee duufaanno ka soo kacaya gudaha badweynta hindiya, kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mid xeebaha Puntland.
Qubarada ku xeeldheer saadaasha cimilada ee xarunta saadaasha cimilada IGAD ayaa sheegaya in duufaanadu dhanka waqooyi u sii socdaan ilaa ay caga dhigtaan dalka Yeman abbaaraha 26ka May 2018 oo berrito ah.
Qaybo ka mid ah duufaannadan ayaa la socdaan daruuro iyo roob oo la saadaalinayo inay ku dhufan doonaan xeebaha Soomaaliya sida ay sheegtay IGAD, iyadoo wadarta biyaha roobabkaasi lagu qiyaasay 30 mm.
Dad ku dhow 50 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen roobabkii duufaanta watay ee toddobaadkan horraantiisii ku dhuftay gobollada Awdal iyo Salal.
About Admin (6538 Articles)
Trump warns Iran not to threaten US or it will face ‘end’…
Saudi Arabia calls urgent Gulf, Arab league meetings over tensions…
Egypt blackface sketch about Sudanese spotlights racism in region…
Suuqa kala iibsiga ee xagaaga oo shidan oo laacibiin badan ku kala wareegi doona…
Kabtanka kooxda Manchester City Vincent Kompany oo isaga tagaya kooxda…
Mesut Ozil iyo gacaladiisa oo la afuray Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan…